Author Topic: Mahima Silwal (महिमा सिलवाल) (Read 12445 times)
22366456_1163457483786948_4419611831545902527_n.jpg (81.71 kB, 960x720 - viewed 715 times.)
« Reply #3 on: February 13, 2020, 08:09:56 PM »
mahima.jpg (11.83 kB, 480x360 - viewed 535 times.)
mahimasilwal1164.jpg (623.28 kB, 950x1078 - viewed 588 times.)
hajdo--mahima-silwal-5a5ae334b837a2.27304993.jpg (48.82 kB, 750x500 - viewed 559 times.)
10952091_953105728034594_440071046959826587_n.jpg (48.57 kB, 540x960 - viewed 524 times.)
« Last Edit: February 13, 2020, 08:40:59 PM by samir211 »
« Reply #4 on: February 18, 2020, 02:25:41 AM »
« Reply #5 on: February 22, 2020, 05:03:11 AM »
महिमालाई १० प्रश्न : प्रेम गर्ने आँट कसैले देखाउन सकेनन्
काठमाडौँ । एक समयकी हट अभिनेत्री हुन् महिमा सिलवाल । ग्ल्यामरमा उदार उनको पहिरनको चर्चा खुबै हुन्थ्यो पहिले । अहिले भने ‘कुल’ भएकी छन् उनी । पछिल्लो समय उनलाई हट पहिरनमा बिरलै देख्न पाइन्छ । जिगोलो, अप्रिल फुल, दानवलगायत दर्जनभन्दा बढी चलचित्रकी यी नायिका व्यावसायिक फड्को मार्नमा भने पछि नै छिन् । सायद त्यसैले होला उनी अचेल ‘चुजी’ भएकी छन् । अर्थात् छानेर मात्र चलचित्र अभिनय गर्न थालेकी छन् । निर्र्माता रिझाएर चलचित्र पाउँछिन् भन्ने हाल्ला पनि चलेको थियो, उनको बारेमा । ती हल्ला गलत भएको बताउँदै अहिलेसम्म डेटिङ अनुभव नभएको सुनाउँछिन् । प्रेमभन्दा पनि करियरलाई अहिले महत्वका साथ हेरेको बताउने उनीसँग कुबेर गिरीले राखेका दस प्रश्न ।
कत्तिको नक्कल पार्नुहुन्छ ?
खासै नक्कली छुइनँ है । अभिनयबाहेक अन्य समयमा पनि मलाई मेकअपमा बस्न मन लाग्दैन । कुनै पनि कार्यक्रम वा सभा समारोहमा जानुपर्यो भने हल्ला गर्नै पर्यो । १० देखि १५ मिनेटभित्रमा मेकअप सिध्याउँछु । मस्कारा, कोल्ड क्रिम, लिपस्टिक सधैँ लगाउने गरेकी छु ।
फेसनमा कति ध्यान दिनुहुन्छ ?
चलेका फेसन लगाउन रुचाउने केटी हुँ म । त्यसैले समयअनुसार जे पहिरन बजारमा चलेको छ, त्यो किनिहाल्छु । मलाई प्रायः गाउन र वान पिस लगाउन मनपर्छ ।
फिटनेसमा त्यति रुचि छैन भन्दा पनि हुन्छ । बिहान घरमा हल्का जुम्बा गर्छु । त्यसपछि साइक्लिङ गर्ने बानी छ ।
तपाईं कति रुनु हुन्छ ?
चलचित्रको अभिनय छाडेर भन्ने हो भने रियल लाइफमा नरुने केटी म । किन किन मलाई सितिमिति रुनै आउँदैन । आजभन्दा चार वर्ष अगाडि हजुरआमा बित्नुभएको थियो । त्यो बेला धेरै रोएकी थिएँ ।
रिसाहा केटी भन्छन् नि ?
हो, यो कुरो सही हो । मलाई धेरै रिस उठ्छ । किन किन म यसलाई मेन्टेन गर्न नै सक्दिन । तर लामो समयका लागि रिस उठ्दैन । छोटो समयका लागि सानोसानो कुराले रिस उठिरहेको हुन्छ । यो समयमा म जे पनि गर्न सक्छु ।
केही पहिले प्रेमको हल्ला चलेको थियो नि, सही हो ?
यो नचाहिँदो हल्ला हो । म अहिलेसम्म प्रेममा छैन । यसमा अल्झिने समय होइन मेरो । पहिले करियर बनाउँछु । अनि प्रेम, रोमान्स गरौँला । अर्काे कुरा अहिलेसम्म प्रेम गर्ने आँट पनि कसैले देखाएका छैनन् ।
कस्तो ठाउँमा डेटिङ जाने रहर छ ?
मलाई हल्का लाइट म्युजिक, डिम लाइट डिनरको साथमा रोमान्टिक डेटिङ नै मनपर्छ । म चलचित्र क्षेत्रको मानिस भएर होला यस्तो मन परेको सायद ।
रोजेको व्याक्तिसँग डेटिङको अवसर मिल्यो भने ?
अहिलेसम्म कसैले पनि दिएका छैनन् यस्तो अफर । दिए पनि नेपालमा मैले त्यस्तो कसैसँग सोचेकी छैन । नेपाली सबै मलाई दाजुभाइ जस्तो लाग्छ । बलिउडको कुरा गर्ने हो भने बच्चैदेखि सलमान खान मनपर्छ । सायद उनीसँगै जान चाहन्छु ।
बिर्सनै नसक्ने घटना कुनै छ ?
झमेला भन्ने चलचित्रको सुटिङमा टुचिनमा झुन्डिनुपर्ने सिन थियो । तल सेती खोला । मिस्टेकले म त्यहाँबाट खस्ने दृश्य दिनुपर्ने । मलाई टुचिनमा झुन्ड्याइयो । तर तल केही सेफ्टी प्रयोग नगरिएको देखेर मेरो त प्राण नै निस्केला जस्तो भयो । डराई डराई मैले त्यो अभिनय सकेँ । त्यो सिन सम्झेर अहिले पनि डर लाग्छ ।
झगडालु हुनुहुन्छ रे नि ?
नचाहिँदो कुरा । कसले भन्यो यस्तो । म झगाडादेखि सधैँ टाढा बस्ने केटी । अहिलेसम्म ठूलो झगडा कसैसँग भएको छैन । सानोतिनो भयो होला । ठूलो झगडा भयो भने एक किकमा झगडा गर्न आउनेलाई ढाल्दिन्छु ।
« Reply #6 on: February 23, 2020, 01:09:39 AM »
Quote from: samir211 on February 22, 2020, 05:03:11 AM
really sad incident ...
« Reply #7 on: February 23, 2020, 08:57:13 AM »
84672605_2801559256624692_5734033987316219904_o.jpg (99.98 kB, 1080x1633 - viewed 522 times.)
« Reply #8 on: December 07, 2020, 07:59:17 AM »
Messed up #2020
Screenshot_20201206-213854.jpg (482.51 kB, 1080x2280 - viewed 488 times.)